मेरै अगाडी चारवटा गाडी बगायो, म पनि आफ्नो गाडी छोडेर भागेँ – Dainik Sangalo
July 20, 2020 650
काठमाडौं । दुई दिन देखि अनवरत भइरहेको ठूलो वर्षाका कारण मुलुकभर वाढी पहिरो गइरहेको छ । विभिन्न जिल्लामा पहिरोले घर नै बगाएर मानविय क्षती समेत भएको छ । मौसम पूवानुमान महाशाखाले अझ केही दिन वर्षा हुने भएकाले सचेत रहन सुझाएको छ । वर्षाकै कारण विभिन्न स्थानमा पहिरो गएका कारण काठमाडौंवाट अन्य जिल्ला जोड्ने मुख्य सडक अवरुद्ध भएको छ । मुग्लीगं हुँदै पोखरा जाने पृथ्वी राजमार्गको विभिन्न स्थानमा पहिरो गएको छ । जसका कारण पहिरोमा धेरै मानिस वाटोमै अलपत्र परेका छन् ।
आफ्नै अगाडी पहिरोले चारवटा गाडी बगाएपछि उनी पनि ज्यान जोगाउन गाडीको माया मा’रेर गाडी छोडेरै भागेको बताएका छन् । आफु सहित करिब ५० जना ब्यक्ति पहिरोको लेदोमा टेक्दै सुरक्षित स्थानमा आएको भएपनि सुत्केरी र गर्भवती महिला सहित करिब सय जना सोही ठाउँमा रहेको उनको भनाई छ । उनले आफु पनि करिब ४ घण्टा हामी पहिरोको बीचमा फ’सेको बताएका छन्। कतैतिरबाट पनि उद्धार हुने छाँटकाँट नदेखेपछि म बा २० च ८१४८ नम्बरको गाडी त्यही छोडेर ज्यानको माया मा’रेर पहिरोको लेदो हुँदै पछाडि फर्किएँ । घुँडाघुँडासम्म पहिरोको लेदो थियो । खोला उर्लिएको थियो । जोगीमारामा गएको पहिरोवाट ज्यान जोगाएर आएका राजेन्द्रले भने । तस्बिर कान्तिपुरवाट
Prevसंकट परेका बेला भारतले २६ प्रकारका अत्यावश्यक औषधीमा रोक लगाएपछि नेपालले आफै बनायो, अब आत्मनिर्भर बन्दै नेपाल !
Nextधादिङमा पहिरोले चारवटा गाडी पुर्‍यो, मानिस भने सुरक्षित
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पनी मृगौला फेल
आजको राशिफल : वि.सं.२०७७ साल पौष २३ गते । बिहीबार । ईश्वी सन् २०२१ जनवरी ०७ तारिख
चुरोट, गुट्का र रक्सी खादै हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यो अवश्य पढ्नुस। सरकारले लागू गर्यो यस्तो कडा कदम